Mayelana NATHI - Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd.
Kungani Khetha i-Dongshen --- Ukuqonda ukukhiqizwa kwe-Dongshen konke okuzungezile
I-Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. yasungulwa ngo-1986. Iyinkampani yokukhiqiza ibhulashi ne-shaving brush ekhiqiza ukuthengisa / ukuklama nokukhiqiza. Igxila ekukhiqizeni zonke izinhlobo zebhulashi le-makeup / shaving brush. Sikhiqiza ibhulashi le-makeup esezingeni eliphakeme kanye ne-shaving brush brand OEM emazweni athuthukile eYurophu nase-United States, futhi senza ngezifiso ukukhiqizwa kwe-ODM kwenani elikhulu lamakhasimende amancane, aphakathi nendawo namakhulu. Amakhasimende amaningi anesikhathi eside futhi azinzile ukusebenzisana okuhle kwebhizinisi nenkampani yethu. Abasebenzi bethu bokuklama nokukhiqiza, bagxila kwikhwalithi, bagcine izethembiso, futhi banikeze amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kahle nangempendulo esheshayo. Sinemikhiqizo yethu iDongshen, kanye namalungelo obunikazi amaningi wokuklama namandla wokukhiqiza aqinile.
With abasebenzi Bangaphezu kuka-100, ifektri Dongshen Ihlanganisa indawo ingqikithi 15,000㎡. Sineqembu lokuthengisa eliqeqeshiwe, iqembu lobuchwepheshe kanye neqembu elinamandla lokuklama, okuhle ocwaningweni nasekuthuthukisweni. Sinemikhiqizo yethu yamanye amazwe iDongshen. Ngaphezu kwalokho, sinomkhiqizo wethu wasekhaya we-KITTY EAR, ogxile ekwenzeni ibhulashi futhi uhlangana nomqondo wezempilo .Sithole isitifiketi se-FSC samazwe omhlaba. Abathengisi abanolwazi, iqembu le-QA / QC ukuqinisekisa ukuthunyelwa okusheshayo nekhwalithi ephezulu.
Ugxile ocwaningweni lwemboni, amakhono ocwaningo, ukuqamba imishini, imiboniso yamakhasimende ukuqinisekisa ukusekelwa kwamakhasimende okusebenzayo emhlabeni wonke Ukuhlinzeka ngebhulashi lezimonyo lekhwalithi, ibhulashi lokushefa, amathuluzi wokwenza izimonyo namathuluzi okushefa.